Sida Taiwan iyo Somaliland ay ula Tacaalyaan Coronavirus – Beegsonews-Wararka maanta
Home WARARKA MAANTA Sida Taiwan iyo Somaliland ay ula Tacaalyaan Coronavirus
Sida Taiwan iyo Somaliland ay ula Tacaalyaan Coronavirus
Laba dal oo aan aqoonsi lahayn – Taiwan iyo Somaliland – ayaa si fiican uga shaqeeyey derisyadooda waaweyn, ee sida wanaagsan uga faa iidaysta la-dagaallanka faafitaanka cudurka ‘coronavirus’, inta badan iyada oo loo diidey macluumaadka iyo ilaha ay ka helaan waddan kasta oo kale.
Labadooduba waxay ka soo horjeedaan dib-u-dhaca SARS ee Shiinaha iyo hadda COVID-19, Ururka Caafimaadka Adduunka ayaa si weyn u iska indhotiray Taiwan iyo 23 milyan oo ah muwaadiniinteeda cawaaqib xumada diblomaasiyadeed ee ka socota Beijing. Si kastaba ha noqotee, Taiwan, waxay tijaabisay, aqoonsatay, oo ay uga jawaabtay masiibadaas si ka sii foolxun marka loo eego mas’uuliyiinta shuuciga ee Shiinaha oo istiraatiijiyaddoodu ay si joogto ah u diidi jirtay ama u daboolay. In kasta oo Shiinuhu qiray in ka badan 3,000 oo cudurka coronavirus ah ee Hubei, tirada dhabta ah ayaa laga yaabaa inay aad uga badan tahay. Ma jiro dibloomaasi, falanqeeye, ama weriye waligiis aaminin macluumaadka ka imanaya kali-taliyayaasha.
Qaab isku mid ah ayaa loo ciyaaraa marka la eego Somaliland iyo Soomaaliya. Donald Yamamoto, Danjiraha Mareykanka ee Soomaaliya, wuxuu isku dayay inuu xajiyo gargaarka oo dhan iyada oo loo marayo dowladda aadka u liidata ee Soomaaliya si ay gacan uga geysato dhisidda awooddeeda. Fikirkiisu waa mid fudud oo khalad ah: Wuxuu rumeysan yahay in kaalmaynta loo mariyo dowladda Soomaaliya ay u oggolaan doonto madaxweynaha Soomaaliya iyo ra’iisul-wasaaraha inay xoojiyaan awoodda, kaliya maahan lixda dowlad-goboleed ee Soomaaliya, laakiin sidoo kale caasimadda dhexdeeda lafteeda halkaas oo ay waxyar ka qabtaan dibedda. xeryahooda
Istaraatiijiyadda Yamamoto way illowdaa taariikhda Soomaaliya ee aasaaska ah, si kastaba ha noqotee. Qorista akhriga ee aqoonta guud ee Soomaaliya waxay muujineysaa in iskahorimaadyada ku saabsan kaalmada shisheeye ay dardar gelisay guuldarradii gobolka iyadoo hoggaamiyeyaasha qabaa’ilka kala duwan iyo kuwa awoodda lihi ay isku dayeen inay u beddelaan marin-u-helidda gargaarka inay u noqdaan awood shaqsiyadeed. Dhaqan xumo ayaa timid si loo helo oo loo boobo wax kasta oo jilaa siyaasadeed uu xukumi karo ama iibin karo. Isla dhaqdhaqaaqaas ayaa sii socda maanta. Hay’adda Transparency International waxay Soomaaliya u aqoonsatay inay tahay dalka ugu musuqmaasuqa badan adduunka 16-kii sano ee lasoo dhaafay. Jid kale, maalgashiga iyo lacagta gargaarka waxay u badan tahay in laga xado ama loo weeciyo Kuuriyada Waqooyi, Koonfurta Suudaan, Afgaanistaan, Venezuela, ama Yemen marka loo eego Soomaaliya.
Soomaaliya waa inay ku jirtaa jawi wanaagsan. Wax yar ka hor qalalaasaha coronavirus, Koongareeska Mareykanka wuxuu cafiyay $ 1 bilyan oo deyn ah canshuur bixiyeyaasha Mareykanka taas oo qeyb ka ah ballaaran, $ 5 bilyan dadaal caalami ah oo loogu talagalay in lagu siiyo xukuumadda cusub ee Soomaaliya meel bannaan. Ku tuurida lacagta Soomaaliya ayaa laga yaabaa inay ka sii xumeyso dheehitaankeeda, si kastaba ha ahaatee. Xukuumadda Soomaaliya ayaa runtii doorkeedii ay ka geysatay ku-deeqeyaasha caanaha ee caalimka ah si buuxda u muujisay: Wasiirka Maaliyadda Cabdiraxmaan Ducaale Beile ayaa shir-jaraa’id ku qabtay Muqdisho Isniintii, Abriil 13 kaasoo uu sheegay in Soomaaliya ay ugu baahan tahay $ 240 milyan oo dheeraad ah oo dheeraad ah sababta oo ah masiibada. Wuxuu sheegay in istiraatiijiyaddiisa ay noqon doonto “beesha caalamka” oo ka codsata lacag dheeraad ah. Ma uusan soo qaadin kiiska Maxamuud Maxamed Buule, oo ah agaasimaha maaliyadda ee Wasaaradda Caafimaadka, kaasoo horaantii bishan u muuqda mid aan la qarin lacagihii hore loogu qoondeeyay in wax looga qabto cudurka ‘coronavirus’. Mohamed Moalimuu, xoghayaha guud ee Ururka Saxafiyiinta Soomaaliyeed, ayaa sheegay in dowladdu sidoo kale ay tuhmanayaal kale ka raadineyso Wasaaradda Caafimaadka. Duqa Muqdisho, ayaa dhanka kale, ku eedeeyay dowlada inay been ka sheegto heerka cudurka.
In kasta oo Soomaaliya ay heshay kaalmo caalami ah, dawladdeeda – oo ay la socoto taageerada Yamamoto – waxay diiday in ay u qaybinayso wax gargaar ah Somaliland, dawladda aan la aqoonsan ee sheegta saddex-meelood meel tirada guud ee Soomaaliya isla markaana si iskeed ah u xukuntay si dimoqraadi ah ilaa 1991. Si kastaba ha noqotee, Somaliland, waxay leedahay waxay u suurtagashay inay xakameyso faafitaanka fayraska iyada oo aan la helin caawimaad caalami ah laakiin taa beddelkeeda $ 15 milyan laga soo qaaday saldhigeeda canshuureed. Shan iyo toban milyan oo doollar – oo si taxaddar leh loogu qoondeeyay oo loo xisaabiyay — ayaa si aad ah uga waxtar badan $ 240 milyan ama $ 1 bilyan oo ka mid ah deeq-bixiyeyaasha caalamiga ah.
Halkan waxaa ka jira cashar loogu talagalay dadka labadaba bulshada caalamka iyo waaxda Gobolka oo mudnaanta siinaya awoodda xisaabtanka dimoqraadiyadda, oo rumeysan in lacagta ay yaraynayso awoodda. Waxaa laga yaabaa in waqtigeedii la garto in karti iyo hufnaan ay ka badan tahay lacag caddaan ah. Aqoonsiga dibloomaasiyadeed iyo haddii kaleba, dawladuhu waa inay helaan oo keliya caawimaad markay muujiyaan awoodda ay si hufan u isticmaaleen intii ay xadin lahaayeen. Waxaa la joogaa waqtigii la abaalmarin lahaa dowlad wanaagga halkii laga tuuri lahaa lacag wanaagsan xumaanta.
Wararkii ugu dambeeyay Dagaal xalay ka dhacay Degmada Balcad (Aqriso